“Waan iska dhicin karnaa” – Aubameyang oo xaqiijiyay in Asrenal ay garaaci karto Liverpool kulanka habeen dambe – Gool FM
(Liverpool) 23 Agoosto 2019. Weeraryahanka reer Gabone ee Pierre-Emerick Aubameyang ayaa xaqiijiyay in Arsenal ay awood u leedahay inay la ciyaarto kooxda weyn ee Liverpool kulanka berri Sabtida ah ee ka tirsan kulamada 3-aad horyaalka Premier League ee xili ciyaareedkan 2019/20.
Labada kooxood ayaa ku ciyaari doono berri oo Sabti ah garoonka Anfield, kooxda Liverpool ayaana isku diyaarinaysa inay Arsenal soo dhoweyso kulankooda saddexaad ee horyaalka Premier League kal ciyaareedkan.
Gunners ayaa la ciyaari doonta Liverpool oo heysata saddexda weeraryahan ee bahalada ah Maxamed Saalax, Firmino iyo Mane, kuwaasoo wadajikooda dhaliyay 69 gool sanadkii hore tartamada oo dhan.
Pierre-Emerick Aubameyang oo yimid kooxda Arsenal Sanadkii hore ayaa wuxuu yiri:
“Sidii aan aragnay sanadkii hore, Liverpool waxay ciyaareysaa saddex weeraryahan ee horey ah, waxyna runtii sameenayaan waxyaabo fiican, marka tusaale ahaan maxaan u sameyn weynay? Waxaan u maleynayaa inaan sameyn karno”.
“Waxaan u maleynayaa inay jiraan dhowr arrimood isaga egnahay, aniga iyo Nicolas Pépé waxaan ku raaxeysaneynaa xawaare, sida Mane iyo Maxamed Saalax”.
“Alexandre Lacazette waa ciyaartoy awood u leh inuu kubadda ilaashado, si fiicana u ciyaaro sida Firmino oo kale, haa, aad ayaan ugu dhow nahay” ayuu hadalkiisa sii raaciyay weeraryahanka Gunners ee Pierre-Emerick Aubameyang.